Yukio Mishima, ihe atụ nke ịdọ aka ná ntị na ịba ụba na leta Japanese | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, Ndị edemede, Akụkọ ihe mere eme
Yukio Mishima bụ onye edemede, onye edemede, na onye edemede edemede, weere dị ka otu n'ime ndị edemede Japan kacha mkpa na narị afọ nke iri abụọ. Ọrụ ya jikọtara ọdịnala ndị Japan na nke ọgbara ọhụrụ, si otú a nweta mmata akwụkwọ mba ụwa. Na 1968, a hoputara ya maka Nobel chọr'inwe na Akwụkwọ, na oge ahụ onye mmeri nke onyinye a bụ onye ndụmọdụ ya: Yasunari Kawabata.
Onye edemede eji ịdọ aka ná ntị ya mara ya, yana ọtụtụ isiokwu ya (mmekọahụ, ọnwụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị ...). Na 1988, ụlọ mbipụta Shinchōsha - nke bipụtara akụkụ buru ibu nke akwụkwọ ya - mepụtara Mishima Yukio Nrite maka nsọpụrụ onye edemede. Enyere onyinye a maka afọ iri abụọ na asaa, mbipụta ikpeazụ bụ na 27.
1.1 Mmụta mbụ
1.2 Agha Ụwa nke Abụọ
1.3 Ọzụzụ ọkachamara
1.4 Egwuregwu edemede
1.5 Emume ọnwụ
2 Akwụkwọ kacha mma site n'aka onye edemede
2.1 Nkwupụta nke ihe nkpuchi (1949)
2.3 Pavilion Golden ahụ (1956)
2.5 Nrụrụ aka nke mmụọ ozi (1971)
A mụrụ Yukio Mishima na Jenụwarị 14, 1925 na Tokyo. Ndị mụrụ ya bụ Shizue na Azusa Hiraoka, ndị mere ya baptizim n’aha: Kimitake Hiraoka. Nne nne ya Natsu zụlitere ya, onye kpọpụrụ ya na nne na nna ya mgbe ọ dị obere.. Ọ bụ nwanyị na-achọsi ike ma chọọ ịzụlite ya n'ọkwá dị elu.
Site na echiche nne nne ya, banyere n'ụlọ akwụkwọ Gakushüin, obu ebe di elu na ndi Japan. Natsu choro ka nwa nwa ya nwee ezigbo mmekorita ya na aristocracy nke obodo. N'ebe ahụ, o jisiri ike isonye na kọmitii na-ahụ maka edemede akwụkwọ nke ọha mmadụ na-ede akwụkwọ. Nke a mere ka o dee ma bipụta akụkọ mbụ ya: Hanazakari dịghị Mori (1968), maka magazin a ma ama Bungei-Bunka.
Agha Ụwa nke Abụọ
N'ihi agha ndị dapụtara Agha Worldwa nke Abụọ, a kpọrọ Mishima ka o sonye n’ thetù Ndị Agha Mmiri Japan. N'agbanyeghị na ọ nwere anụ ahụ na-esighị ike, ọ nọgidere na-enwe ọchịchọ ịlụ ọgụ maka obodo ya. Mana nrọ ya gbanwere mgbe o gosipụtara onyogho na nyocha ahụike, ihe mere dọkịta jiri gụpụ ya na-eche na o nwere mgbaàmà nke ụkwara nta.
Ọ bụ ezie na Mishima nwere mmasị n'ịde ihe mgbe niile, ọ nweghị ike iji ya wepụta oge ọ bụ nwata.. Nke a bụ n'ihi na ọ si n'ezinụlọ na-agbanwe agbanwe na nna ya kpebiri na ya ga-agụ akwụkwọ mahadum. Maka nke a, ọ banyere na Mahadum Tokyo, ebe ọ gụsịrị akwụkwọ na Iwu na 1957.
Mishima rụrụ ọrụ aka ya otu afọ dịka onye otu ndị ọrụ na-ahụ maka ego na Japan. Mgbe oge ahụ gasịrị, ike gwụchara ya nke ukwuu, ya mere nna ya kpebiri na ya ekwesịghị ịnọgide na-arụ ọrụ ebe ahụ. Ka oge na-aga, Yukio tinyere onwe ya kpamkpam ide ihe.
Akwụkwọ mbụ ya bụ Tozoku (Ndị ohi, 1948), nke a jiri mara ya na ngalaba edemede. Ndị nkatọ weere ya "sonye na ọgbọ nke abụọ nke ndị edemede mgbe agha bisịrị (1948-1949)". Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gara n'ihu na mbipụta nke akwụkwọ nke abụọ ya: Kamen no kokuhaku (Nkwuputa nkpuchi, 1949), ọrụ nke o nwetara nnukwu ihe ịga nke ọma.
Site n'ebe ahụ onye edemede dere banyere ịmepụta ngụkọta nke akwụkwọ 38 ọzọ, egwuregwu 18, edemede 20 na libretto. Anyị pụrụ ịkpọ aha n’akwụkwọ ya ndị kacha pụta ìhè:
Asịrị nke sọfụfụ (1954)
Paulu Paịl ahụ (1956)
Onye oru ugbo mmiri furu efu nke oke osimiri (1963)
Anyanwụ na ígwè (1967). Edemede Autobiographical
Tetralogy: Oké osimiri nke ọmụmụ
Mishima hiwere na 1968 "Tatenokai" (ọta ọha), otu ndị agha ndị agha mejupụtara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ntorobịa mba. Na November 25, 1972, ọ banyere na Eastern Command nke Tokyo Self-Defense Forces, yana ndị agha 3. N'ebe ahụ ka ha meriri ọchịagha ahụ na Mishima n'onwe ya gara mbara ihu iji kwuo okwu n'ịchọ ụmụazụ.
Isi ọrụ ha bụ ime mgbanwe ọchịchị na ka eze ukwu laghachi n'ọchịchị. Kaosiladị, ndị otu nta enwetaghị nkwado ndị agha nọ ugbu a n'ebe ahụ. Sia m tokenyeneke utom esie, Mishima ama ebiere ndondo oro ndinam edinam uwotowo oro ẹkekotde Japan nte seppuku m̀m hara harakiri; ma si otu a kwụsị ndụ ya.
Nkwuputa nkpuchi (1949)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ nke abụọ nke onye edemede, nke otu Mishima weere dị ka autobiographical. A na-akọ peeji 279 ya na onye mbụ Koo-chan (dị mkpirikpi maka Kimitake). Edere atụmatụ ahụ na Japan ma gosipụta oge ọ bụ nwata, ntorobịa na ntorobịa nke onye mbụ. Na mgbakwunye, isiokwu ndị dị ka nwoke idina nwoke na facades ụgha nke ọha ndị Japan n'oge ahụ.
Koo-chan A zụlitere ya n'oge oge ọchịchị ndị Japan. Ọ Ọ bụ onye dị gịrịgịrị, ma chanwụrụ achagharị, na-adị ka dimkpa, na-arịa ọrịa. Ruo ogologo oge, ọ ghaghị imeso ọtụtụ mgbagwoju anya iji dozie ụkpụrụ ndị isi obodo. O biri na ezinụlọ nke nne nne ya na-elekọta, onye zụlitere ya naanị wee nye ya ezigbo agụmakwụkwọ.
En N’afọ iri na ụma ya, Koo-chan malitere ịhụ ihe na-amasị ya n’ebe ndị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya nọ. Ka nke a na-eme, ọ na-amalite ọtụtụ echiche efu nke mmekọahụ na nke metụtara ọbara na ọnwụ. Koo-chan na-agba mbọ ịme mmekọrịta ya na enyi ya Sonoko - iji mee ka ọdịdị gị pụta - mana nke a anaghị arụ ọrụ. Nke a bụ oge siri ike maka ya, n'ihi na ọ ghaghị ịchọpụta ma gosipụta njirimara nke ya.
Nkwupụta nke a ...
Ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ edebere n’afọ ndị ikpeazụ nke Agha Worldwa nke Abụọ. Akụkọ ahụ na-akọwa ihe mere eme nke mere na 1950, mgbe a na-agbanye Golden Kinkaku-ji Pavilion ọkụ na Kyoto. Onye isi ya bu Mizoguchi, onye na akuko akuko banyere onye mbu.
Nwa okorobịa ahụ nwere mmasị na ịma mma nke ihe a na-akpọ Golden Pavilion ma nwee agụụ iso akụkụ nke ebe obibi ndị mọnk Zen nke Rokuojuji. Akwụkwọ ahụ natara Yomiuri Nrite na 1956, na mgbakwunye, ọ gbanweela ọtụtụ oge na sinima, yana egwuri egwu, egwu egwu, egwu ogbara ohuru na opera.
Ihe nkata ahụ dabeere na ndụ Mizoguchi, WHO otu nwa okorobịa na-eche banyere nsụ ya na ọdịdị na-adịghị adọrọ mmasị. Ike gwụrụ ya mgbe niile, ọ kpebiri ịkwụsị ịga akwụkwọ iji soro nzọụkwụ nna ya, onye bụ onye mọnk Buddha. Maka nke a, nna ya, onye na-arịa ọrịa, nyefere agụmakwụkwọ ya na Tayama Dosen, tupu ebe obibi ndị mọnk na enyi.
Mizoguchi Ọ gafere ihe omume ndị gosipụtara ndụ ya: ekwesịghị ntụkwasị obi nke nne ya, ọnwụ nna ya na ịjụ ịhụnanya ya (Uiko). N'ịbụ onye ọnọdụ ya kpaliri, nwa okorobịa ahụ banyere n'ụlọ obibi ndị mọnk Rokuojuji. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ na-echegbu onwe ya banyere iche echiche banyere bọmbụ nwere ike ịda, nke ga-ebibi Golden Pavilion, eziokwu nke na-adịghị eme. N'agbanyeghị nsogbu ahụ, Mizoguchi ga-eme ihe a na-atụghị anya ya.
Pavilion ọla edo ...
Nrụrụ aka nke mmụọ ozi (1971)
Ọ bụ akwụkwọ ikpeazụ nke tetralogy ahụ Oké osimiri nke ọmụmụ, usoro nke Mishima kwuputara na o juru mgbanwe na ntinye nke ndi Japan. Na ibé atọrọ na 70s wee soro akụkọ nke ya isi agwa, onye ikpe: Shigekuni Honda. Ekwesiri ighota na onye ode akwukwo nyefere onye oru a ihe edere ya otu ubochi o kpebiri igbu ndu ya.
Akụkọ malitere mgbe Honda zutere Tōru Yasunaga, nwa mgbei dị afọ iri na isii. Mgbe ọkàikpe ahụ nwụnahụrụ nwunye ya, ya na Keiko nọ na-akpakọrịta, bụ́ onye ọ gwara banyere ọchịchọ ya ikuchi Toru. Ọ na-eche na ọ bụ nlọghachi nke atọ nke enyi ya site na nwata Kiyoaki Matsugae. N'ikpeazụ ọ na-achọ nkwado ya ma nye ya agụmakwụkwọ kachasị mma.
Mgbe T turningru gbara afọ 18, ọ ghọrọ onye nsogbu na onye nnupụisi.. Omume ya na-eduga ya igosipụta iro megide onye nkuzi ya, ọbụnadị na-achịkwa ime ka enweghị ahụike Honda.
Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, Keiko kpebiri ikpughere nwa okorobịa ahụ ezigbo ihe kpatara ya, na-adọ ya aka ná ntị na mmalite ụwa ọ nwụrụ mgbe ọ dị afọ 19. Otu afọ mgbe e mesịrị, Honda mere agadi na-eleta ụlọ nsọ Gesshū, ebe ọ ga-anata mkpughe dị ịtụnanya.
Nrụrụ nke a ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akụkọ ndụ » Yukio mishima